के यो तथ्यांक गलत हो ? बिलकुलै होइन । सेक्स कति पटक गरिदैछ, यसले त्यो बेला सम्म फरक पर्दैन जब सम्म तपाई र तपाईको पार्टनर यसले सन्तुष्ट हुन्छन् । अध्ययनकर्ताका अनुसार हप्तामा एक पटक यौन सम्पर्क गरेर खुशी रहन सकिन्छ ।
सुत्ने कोठामा कतै तपाइले गलत वस्तु राख्नु भएको त छैन ? आजै हटाइ हाल्नुहोस नत्र सङ्कट पर्ला !